Wakiilka Difaaca dabiiciga ah ee Lactoperoxidase: Shaqada, Nidaamka, Codsiga & Ammaanka Kiimikada Shangke
Miisaanka oo luma
RAW MT2 (MELANOTAN-II) AADAHA
Cuntada dheeriga ah
Astaxanthin dabiiciga ah (472-61-7)
Saliid gabbaldayaha (Saliil abuur saliid ah) 83%
Acid-ga loo yaqaan 'linoleic acids' (CLA) 95%
Nootropics drug daroog caqli badan
Dufanka 7P ee cufan
Budada Raw Nooglutyl
Wakiilka Dabiiciga ah ee La-dagaalanka Bakteeriyada Lactoperoxidase: Shaqo, Nidaam, Codsi & Badbaado
Lactoperoxidase (LPO), oo laga helo qanjirada candhuufta iyo qanjiraha, ayaa ah cunsur muhiim u ah jawaab-celinta is-difaaca ee muhiim u ah joogtaynta caafimaadka afka. Doorka ugu muhiimsan ee lactoperoxidase waa in lagu naafeeyo ionioioyanion ion (SCN−) oo laga helo candhuufta iyadoo ay jirto joogitaanka hydrogen peroxide taasoo ka dhalatay badeecada muujisa waxqabadka daawada lidka ku ah. LPO laga helo caanaha bovine-ka ayaa lagu dabaqay warshadaha caafimaadka, cuntada, iyo warshadaha la isku qurxiyo sababta oo ah shaqadeeda iyo qaab dhismeedka ay ugu egtahay enzyme aadanaha.
Alaabada nadaafadda ee afka laga qaato waxaa lagu kobciyaa nidaamka loo yaqaan 'lactoperoxidase' si ay ugu fidiso ikhtiyaar aad u wanaagsan oo ah nooca dawada lagu cadaydo ee fluoride. Sababta oo ah codsiyada ballaaran ee dheeraadka lactoperoxidase, baahidiisu si aad ah ayey kor ugu kacday sannadihii la soo dhaafay, welina wey sii kordheysaa.
Waa maxay Lactoperoxidase?
Lactoperoxidase waa fudud oo loo yaqaan 'peroxidase enzyme' oo laga soo saaray qanjirrada qanjirada, qanjirada, iyo qanjidhada salivary, oo u shaqeeya sidii wakiilka anti-bakteeriyada dabiiciga ah. Bini’aadamka dhexdiisa, lactoperoxidase enzyme waxaa ku lifaaqan hidda-wadaha LPO. Enzyme-kaan waxaa badanaa laga helaa xoolaha, oo ay ka mid yihiin bini-aadamka, jiirka, xayawaanka, geelu, lo'da, lo'da, riyaha, Ilama, iyo ido.
LPO waa wakiilka dawooyinka lidka ku ah dawooyinka aad waxtar u leh. Isticmaalka Lactoperoxidase, ayaa sidaas darteed, ku saleysan mabda 'this. Codsiga 'loo yaqaan' Lactoperoxidase 'ayaa markaa laga helaa badbaadinta cuntada, xalka indhaha, iyo ujeedooyinka la isku qurxiyo. Sidoo kale, budada lactoperoxidase ayaa loo adeegsaday boogta iyo daaweynta ilkaha. Intaa waxaa sii dheer, LPO waa wakiil waxtar leh anti-virus iyo anti-tumor. Hoos waxaa looga wada hadlay sirta loo adeegsado lactoperoxidase:
i. Kansarka naasaha
Kansarka Lactoperoxidase Awoodda maareynta waxay la xiriirtaa awooda ay ku leedahay in ay oksidze estradiol. Oksidowgu wuxuu keenaa culeys ku dhaca unugyada kansarka naasaha. Hawsha loo yaqaan 'Lactoperoxidase' halkan ayaa ah inay keento silsilado ah falcelinno horseedaysa isticmaalka oksijiinta iyo isu-ururinta hydrogen peroxide intracellular. Natiijooyinka ka dhashay falcelintaas awgeed, LPO waxay si wax ku ool ah u dishaa unugyada burooyinka ee vitro. Sidoo kale, macrophages ee loo soo gaabiyo LPO ayaa lagu dadaaleyaa baabi'inta unugyada kansarka, iyaga oo dilaya.
ii. Saameynta anti-bakteeriyada
Enzyme-ka LPO wuxuu u shaqeeyaa xarun dabiici ah oo ka mid ah nidaamka difaaca jir-ahaaneed ee difaaca unugyada naas-nuujinta wuxuuna si rasmi ah ula dhacsan yahay uumi-baxa 'thiocyanate ion' -ka hypothiocyanate-ka bakteeriyada. LPO waxay xakameyn kartaa koritaanka tiro badan oo ah sheyga sheyga iyada oo loo marayo falcelin enzymatic oo ku lug leh ionioyanyan ion-ka iyo hydrogen peroxide sida cofactors. Waxqabadka antibiyootigga ee LPO waa mabda 'aasaasida sameynta ions hypothiocyanite iyada oo loo marayo dhaqdhaqaaqa enzymes. Po Hypothiocyanite ion waxay awoodaan inay ka falceliyaan xuubka bakteeriyada. Waxay sidoo kale sababaan carqaladeynta shaqeynta enzymes-ka gaar ahaaneed ee gaarka ah. Lactoperoxidase waxay dishaa bakteeriyada aan fiicnayn waxayna ka hortagtaa koritaanka iyo horumarka bakteeriyada-Gram-positive.
iii. Lactoperoxidase ee la isku qurxiyo
Isku darka budada lactoperoxidase, gulukooska, thiocyanate, iodide,
iyo glucose oxidase, waxaana la ogyahay inay wax ku ool u yihiin badbaadinta waxyaabaha la isku qurxiyo.
iv. Lactoperoxidase caano Ilaalinta
Awoodda lactoperoxidase ee dayactirka tayada saafiga ah ee caano ceyri ah muddo wakhti ah ayaa laga sameeyay dhowr qaybood iyo daraasado tijaabo ah oo laga fuliyey gobollo kala duwan oo juqraafi ah. Kaydinta loo yaqaan 'Lactoperoxidase' waxaa loo isticmaali karaa in lagu ilaaliyo caano ceyriin ah oo laga helay noocyo kala duwan. Sida ugu waxtarka badan ee habka loo adeegsado waxay kuxirantahay arrimo dhowr ah. Arrimahan waxaa ka mid ah heerkulka caano inta lagu jiro muddada daaweynta, nooca faddaraynta microbiological, iyo xaddiga caanaha.
Lactoperoxidase waxay saamayn bakteeriyada ku samaysaa caano ceyri ah. Xogta cilmibaadhista iyo khibradaha laga helo waxqabadka dhabta ahi waxay muujinayaan in lactoperoxidase loo isticmaali karo wixii ka baxsan xadka heerkulka (15-30 digrii Celsius) ee lagu tilmaamo tilmaamaha codex ee 1991. Dhamaadka ugu hooseeya ee cabirka heerkulka, daraasado kala duwan ayaa muujinaya in firfircoonaanta lactoperoxidase waxay daahi kartaa unugyada bakteeriyada caloosha 'psychrotrophic' sidaasna waxay dib u dhigi kartaa khalkhalka caano maalmo dheeraad ah marka loo eego qaboojinta kaligiis. Waa muhiim in la ogaado in ujeeddada loo adeegsado lactoperoxidase aysan ahayn in caanaha laga dhigo mid ammaan ah si loo isticmaalo laakiin loo ilaaliyo tayadeeda asalka ah.
Ku celcelinta nadaafadda wanaagsan ee waxsoosaarka caanaha waxay muhiim u tahay waxtarka lactoperoxidase iyo tayada caanaha ee microbiological. Badbaadada iyo cabitaanka cusub ee caanaha waxaa lagu gaari karaa oo keliya isku darka daaweynta kuleylka ee caanaha iyo dhaqamada nadaafadeed ee wanaagsan ee ka madax banaan isticmaalka lactoperoxidase.
v. Shaqooyinka kale
Daraasadaha ayaa muujiyay in marka lagu daro saameynta ka hortagga fayraska, Lactoperoxidase ay sidoo kale ka ilaalin karto unugyada xayawaannada waxyeelada kala duwan iyo peroxidation, sidoo kale waa qayb muhiim ah oo ka mid ah nidaamka difaaca ee looga hortago sheyga 'pathogenic microorganisms' ee nidaamka dheef-shiidka ee carruurta dhasha ah.
Waa maxay Nidaamka Lactoperoxidase?
Nidaamka Lactoperoxidase (LPS) wuxuu ka kooban yahay seddex qaybood, oo ay ka mid yihiin lactoperoxidase, hydrogen peroxide, iyo thiocyanate (SCN¯). Nidaamka 'Lactoperoxidase' wuxuu leeyahay waxqabadka anti-bakteeriyada kaliya marka saddexdaas qaybood ay wada shaqeeyaan. Isticmaalka nolosha dhabta ah, haddii uruurinta qayb gaar ah oo ka mid ah nidaamka aysan ku filnayn, waa in lagu daraa si loo hubiyo saameynta anti-bakteeriyada, oo loo yaqaan firfircoonida LPS. Dhexdooda, fiirsashada lactoperoxidase waa inaysan ka yarayn 0.02 U / mL.
U fiirsashada lactoperoxidase ee dabiiciga ah ee caanaha boodhka waa 1.4 U / mL, oo ​​laga yaabo inuu buuxiyo shuruudahan. SCN¯ waxaa si ballaaran looga heli karaa siraha iyo unugyada xayawaanka. Caano, urursanaanta thiocyanate waxay u yar tahay 3-5 μg / mL. Tani waa mid xad u leh waxqabadka nidaamka Lactoperoxidase. Waxaa la soo jeediyay in loo baahan yahay in loo yaqaan 'thiocyanate' si loo hawlgeliyo nidaamka lactoperoxidase ku dhowaad 15 μg / mL ama in ka badan. Taasi waa sababta aan ugu baahan nahay inaan ku darno this exogenous thiocyanate si loo dardar geliyo nidaamka lactoperoxidase. Maaddada hydrogen peroxide ee ku jirta caanaha, oo la soo saaray, waa 1-2 extg / Ml oo keliya, isla markaana dhaqdhaqaaqa LPS wuxuu u baahan yahay 8-10 μg / mL oo ah hydrogen peroxide. Taasi waa sababta hydrogen peroxide ay tahay in loo bixiyo dibadda.
Nidaamka lactoperoxidase wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa nidaamka difaaca jirka, wuxuu dili karaa bakteeriyada ku jirta caanaha iyo dheecaanka xuubka waxaana laga yaabaa inay lahaadaan barnaamijyo daaweyn ah.
Alaabada cuntada iyo daryeelka caafimaadka, kordhinta ama kordhinta nidaamka lactoperoxidase mararka qaarkood waxaa loo isticmaali karaa xakameynta bakteeriyada.
Sidee u shaqeeyaan?
LPS wuxuu ka kooban yahay waxsoosaarka ka hortagga bakteeriyada ka timaadda 'SCN¯catalyseded' ee LPO ay ku jirto joogitaanka hydrogen peroxide. Waxaa yidhi lactoperoxidase waxqabadka dawada lidka ku ah si dabiici ah ayaa laga helaa dhowr dheecaanno jidhka ah sida casiir calooleed, ilmada, iyo candhuufta. Labada qaybood ee muhiimka u ah nidaamka ka hortaga daawada, oo ah hydrogen peroxide iyo thiocyanate, waxay ku jiraan caano kala duwan, iyadoo kuxiran noocyada xayawaanka iyo quudinta la siinayo.
Caano cusub, howlaha lidka-dawada jirka ayaa daciif ah waxayna ku nagaadaan ilaa 2 saacadood maadaama caanuhu kaliya ay kujiraan heerarka suboptimal ee hydrogen peroxide iyo io-thyancyanate ion. Thiocyanate waxaa lagu daraa kaas oo lagu sifeeyay fal-celin 2 elektiroonig ah oo soo saaraysa hypothiocyanite
Thiocyanate wuxuu u shaqeeyaa isku-duwaha nidaamka Lactoperoxidase. Natiijo ahaan, tirada tirooyinka sulfhydryls ee guud ahaan waa ka madax bannaan yihiin ionioyanyan ion illaa iyo inta
Moodada 'siol' waa la heli karaa
Thiocyanate ma daalan
Hydrogen peroxide ku filan ayaa jira
Thiocyanate wali laguma darin maadada amino acid
Sidaas darteed, thiocyanate waxay dib u soo celisaa saameynta anti-bakteeriyada ee nidaamka lactoperoxidase ee caanaha cusub. Tani waxay kordhineysaa nolosha shelf ee caano cusub ee xaaladaha kuleylka muddo ah toddobo illaa sideed saacadood.
Codsiyada Lactoperoxidase / Isticmaalka
i. Anti-microbial Action
Waxqabadka anti-microbial ee nidaamka lactoperoxidase waxaa lagu arkaa tallaabada bakteeriyada iyo falgalka bakteeriyada ee microorganisms qaarkood laga helo caano cayriin. Aaladda bakteeriyada dila ayaa ka shaqeysa in kooxda thiol-ka laga helo xuubka dheecaanka microbial ee xuubka 'Plasma membrane' ay tahay mid laga buuxiyo. Tani waxay keenaysaa burburka qaab-dhismeedka xuubka xuubka ee plasma taasoo horseedaysa daadinta polypeptides, ion-ka potassium, iyo amino acids. Qaadashada purines iyo pyrimidines, gulukooska, iyo amino acid ee unugyada waa la xakameynayaa. Sidotiinta isku-dhafan ee DNA, RNA, iyo borotiinnada sidoo kale waa la mamnuucay.
Bakteeriyada kaladuwan waxay muujiyaan heerar kala duwan oo xasaasiyad nidaamka lactoperoxidase. Bakteeriyada aan xasaasiga ahayn, sida Salmonella, Pseudomonas, iyo Escherichia coli, waa la xakameynayaa oo la dilaa. Bakteeriyada loo yaqaan 'Lactic acid' iyo Streptococcus ayaa la mamnuucay. Burburinta bakteeriyadaan habka loo yaqaan 'lactoperoxidase system' waxay sababtaa daadinta qaar ka mid ah nafaqooyinka, waxay ka horjoogsataa bakteeriyada inay qaadato nafaqooyinka, tanina waxay horseedda hoos u dhaca ama dhimashada bakteeriyada.
ii. Daaweynta cudurka 'paradentosis', cirridka, iyo dila unugyada buro
LP Waxaa la rumeysan yahay inay wax ku ool u tahay daaweynta cudurka ciridka iyo paradentosis. LPO waxaa loo isticmaalay in lagu luqluqo afka si loo yareeyo bakteeriyada afka laga helo, taasina waxay keentay, aashito ay soo saarto bakteeriyadaani. Antibody conjugates ee nidaamka lactoperoxidase iyo gulukooska oxidase waxay muujiyeen inay wax ku ool u yihiin baabi'inta iyo aakhirka dila unugyada burooyinka ku jira vitro. Sidoo kale, macrophages-ka loo yaqaan nidaamka loo yaqaan 'lactoperoxidase' ayaa loo hawl galaa inuu burburiyo oo dilo unugyada kansarka.
iii. Daryeelka afka
Daraasado caafimaad oo kala duwan oo sharraxaya waxtarka LPS ee dawada cadayga ayaa la diiwaangeliyay. Ka dib markii si aan toos ahayn loo muujiyo, iyadoo la adeegsanayo cabbiraadaha cabbiraadaha xaaladaha cabirrada tijaabada ah, in dawada ilkaha lactoperoxidase ay ku jirto amyloglucosidase (γ-amylase) waxay ku leedahay saameyn waxtar leh daryeelka afka. Enzymes-ka sida gulukoosta oxidase, lysozyme, iyo lactoperoxidase ayaa si toos ah looga gudbiya daawada dawada cadayga loona wareejiyo daloolka.
Ahaanshaha xubno kahadal ah, enzymes-kani waa firfircoonaan firfircoonaan sare leh. Sidoo kale, LPS waxay leedahay saameyn faa iido leh oo looga hortago kahortaga saxarada carruurnimada hore iyadoo hoos loo dhigayo tirada korantada ee ay sameyso microflora cariogenic maadama ay xoojineyso uruurinta thiocyanate.
Iyada oo bukaanka xerostomia, dawada ilkaha lactoperoxidase wuu ka sarreeyaa marka la barbar dhigo dawada daawada cadayga ee fluoride marka ay timaaddo sameynta huurada. Codsiyada LPS kuma koobna cudurka loo yaqaan 'preontiteitis' iyo xasaasiyadaha. Isku darka lactoperoxidase iyo lysozyme ayaa loo isticmaali karaa daaweynta gubashada afka ee gubashada.
Marka LPS lagu daro lactoferrin, iskudhafkan ayaa la dagaallamaya abuurosis. Marka LPS lagu daro lysozyme iyo lactoferrin, LPS waxay ka caawineysaa hagaajinta astaamaha xerostomia. Sidoo kale, muruqyada leh nidaamka loo yaqaan 'lactoperoxidase system' waxay gacan ka geystaan ​​hagaajinta astaamaha kansarka afka marka soo-saarka candhuufta la xakameeyo cirbadda darteed.
iv. Kobcinta nidaamka difaaca jirka
Lactoperoxidase waxqabadka dawada lidka ku ah waxay ku shaqeysaa howl muhiim ah habka difaaca jirka. Hypothiocyanite waa qayb firfircoon oo ay ka soo baxday waxqabadka lactoperoxidase ee ku yaal thiocyanate. Hydrogen peroxide waxaa soo saaray borotiinnada Duox2 (dual oxidase 2). Sirta qotodheer ee Thiocyanate ee bukaannada qaba cystic fibrosis ayaa hoos loo dhigayaa. Tani waxay keenaysaa hoos u dhigida wax soo saarka dawada lidka ku ah hypothiocyanite. Tani waxay gacan ka geysaneysaa khatarta sare ee infekshanka hawo mareenka.
LPS waxay xannibayaan helicobacter pylori si hufan. Laakiin guud ahaan candhuufta aadanaha, LPS waxay muujineysaa saameyn ka hortageysa bakteeriyada oo daciif ah. LPS ma weeraraan DNA mana ahan mutagenic. Laakiin, xaalado gaar ah, LPS waxay sababi kartaa walaac yar oo oksidheer. Waxaa la cadeeyay in LPO jiritaanka thiocyanate ay kicin karto saameynta cytotoxic iyo bakteeriyada ee hydrogen peroxide marka lagu jiro xaalado gaar ah, oo ay kujirto marka H2O2 uu joogo iskudhafka falcelinta ee xad dhaafka ah thiocyanate.
Intaa waxaa sii dheer, sababtoo ah sifooyinka adag ee waxtar u leh bakteeriyada bakteeriyada iyo caabbinta kuleylka sare, waxaa loo isticmaalaa wakiilka bakteeriyada loo yareeyo bulshada bakteeriyada ku jirta caanaha ama waxyaabaha caanaha iyo tilmaame ka dhigista caanaha ka hortagga jirka. Iyada oo la dhaqaajinayo nidaamka lactoperoxidase, shelf noloshiisa shelf ee caanaha karsan ee la qaboojiyey sidoo kale waa la kordhin karaa.
Iyo, hypothiocyanate ee ay soo saartay lactoperoxidase ayaa loo adeegsan karaa in lagu hor istaago fayraska herpes simplex iyo fayraska iska-difaaca jirka ee bina-aadamka.
Miyuu nabdoon u yahay caafimaadka dadka iyo xoolaha?
Shan iyo toban sano oo daraasad cilmi baaris ah oo lagu sameeyay wadamada soo koraya iyo kuwa horumarsan ayaa waxaa fuliyay oo ay baarayaan FAO / WHO JECFA (Guddiga Wadajirka Khubarada ee waxyaabaha cuntada lagu daro). Kadib markii daraasaddan qoto-dheer iyo wax ku oolka ah la dhammaystiray, adeegsiga nidaamka lactoperoxidase ee ilaalinta caanaha ayaa waxaa oggolaaday FAO / WHO JECFA (Guddiga khubarada ah ee cuntada lagu daro). Xeel-dheerayaasha ayaa sidoo kale ku dhawaaqay habkan inuu caafimaad u yahay caafimaadka aadanaha iyo kan xoolaha labadaba.
LPS waa unug dabiici ah oo casiir calool-jilicsan iyo candhuufta bini-aadamka, sidaas darteedna, waa badbaado marka loo isticmaalo raacitaanka Tilmaamaha Komishanka Codex Alimentarius. Qaacidani wax saameyn ah kuma yeelanayso carruurta nuujisa ilmo kasta ha noqotee. Tani waa sababta daaweynta loo sameeyo kaliya ka dib marka caanaha laga soo saaro jiirka.
Way ka cadaatay dooddeena in nidaamka lactoperoxidase iyo lactoperoxidase ay aad wax ku ool u yihiin uguna waxtar badan yihiin dalabyo fara badan. Haddii aad raadineyso inaad ka dhigto mid kaamil ah iibso lactoperoxidase cilmi-baaristaada ama horumarka daroogadaada, mar dambe ha eegin. Waxaan awood u leenahay inaan ku hawl galno amarro badan oo lactoperoxidase waqtiga ugu gaaban oo suurogal ah oo aan u geyno Mareykanka, Yurub, Kanada, iyo meelo kaloo badan oo adduunka ah. Xor ayaad u tahay inaad nala soo xiriirto si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Jantschko, PG Furtmüller, M. Allegra et al., "Redox dhexdhexaadinta dhirta iyo unugyada mammalian peroxidases: daraasad isbarbardhig ah oo ku-meel-gaar ah oo ku-meel-gaarka ah ee firfircoonidooda ku wajahan soosaarayaasha," Archives of Biochemistry iyo Biophysics, vol. 398, Maya. 1, bogga 12 -22, 2002.
Tenovuo JO (1985). Nadaamka peroxidase ee sirta aadanaha. Tenovuo JO, Pruitt KM (eds.). Nidaamka Lactoperoxidase: kimistariga iyo muhiimadda bayoolajiga. New York: Dekker. p. 272.
Thomas EL, Bozeman PM, Baro DB: Lactoperoxidase: qaab dhismeedka iyo guryaha catalytic. Peroxidase-ka Kiimikada iyo Bayoolajiga. Waxaa tafatiriyey: Everse J, Everse KE, Grisham MB. 1991, Boca Raton, FL. CRC Press, 123-142.
Wijkstrom-Frei C, El-Chemaly S, Ali-Rachedi R, Gerson C, Cobas MA, Forteza R, Salathe M, Conner GE (Ogast 2003). “Lactoperoxidase iyo difaaca hawada ee hawo mareenka aadanaha”. Am. J. Respir. Mol Unug. Biol. 29 (2): 206–12.
Mikola H, Waris M, Tenovuo J: In la xakameeyo fayraska herpes simplex nooca 1, fayraska neef-mareenka, iyo echovirus nooca 11 ee 'hypothiocyanite' oo laga sameeyay peroxidase. Antiviral Res. 1995, 26 (2): 161-171.
Haukioja A, Ihalin R, Loimaranta V, Lenander M, Tenovuo J (Sebtember 2004). “Dareenka Helicobacter pylori ee habka difaaca dabiiciga ah, nidaamka loo yaqaan 'lactoperoxidase', guntin ahaan iyo calyada aadanaha oo dhan". Journal of Medical Microbiology. 53 (Pt 9): 855-60.
1.Lactoperoxidase dulmar guud
2.Waa maxay Lactoperoxidase?
5.Lactoperoxidase Codsi / Isticmaal
6. Miyay aamin ku tahay caafimaadka aadanaha iyo xoolaha?
ka hor xigta
Shangke Chemical waa shirkad farsamo sare leh oo ku takhasustay dawooyinka firfircoon ee dhexdhexaadka ah (APIs), oo leh tiro badan oo khubaro khibrad leh leh, qalab wax soo saar heer sare ah iyo sheybaarro si loo xakameeyo tayada inta lagu jiro wax soo saarka.
Shirkadda Xuchang Fine Industrial Park, Gobolka Henan, Shiinaha